အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: July 2010
တကယ်တော့ စောလွန်း ပါသေးတယ် ၊၊ ခွဲခွာ နှုတ်ဆက် လက်ပြ ထွက်ခဲ့ဖို့ မသင့်တော် သေးမှန်း သိခဲ့ပေမယ့် နောင်သံသရာ အစဉ်အဆက် အတွက် ဒီတစ်ခါ တကယ်ကို နှုတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီ ၊၊
တခါတခါ မိုးခါးရေဆိုတာ ကိုယ်မသောက်မိရင်ပဲ အရူးရယ်လို့ အခေါ်ခံရလေမလား အတွေးဝင်မိသည် ၊၊ ဒါမှမဟုတ် သူများ သောက်သလို ဇွတ်မှိတ်ပြိး သောက်လိုက်ရ လေမလားရယ်လို့လည်း မိုက်လိုက် ချင်မိသည် ၊၊ သို့သော် အဲဒီလို ဝေခွဲရခက်လာတဲ့အခါ လက်လှမ်းမှီသမျှ တရားမှတ်ပွားရင်းပဲ ဖြေသိမ့် တွေးရပါသည် ၊၊ သမာဓိ အပြည့်နဲ့ တရားအသိ မရှိသေးပေမယ့် တက်နိုင်သမျှလေးတော့ သံသရာ ကို အကောင်း အတိုင်းနဲ့ ဖြတ်ချင်သည် ၊၊ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲတဲ့ တဘ၀စံ အကုသိုလ်တရားတွေကို လည်း နောင်သံသရာ ကို သယ်မသွားချင်တော့ ၊၊ ဒီဘ၀ ဒီမျှနဲ့ သံသရာ မပြတ်နိုင်ပေမယ့် နောက်ဘ၀ နောက်ဘ၀ တွေ ကိုတော့ အကောင်း ဆုံး ဆိုတာတွေကို ပဲ သယ်သွားချင်မိတော့သည် ၊၊
လူသာမာန် ပုထုဇဉ်မို့ လောကီကို စုံးစုံးဖြတ်ဖို့ ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်သေးတာ ဘာသာ နားလည်မိပါသည် ၊၊ ကိုယ်မလုပ်နိုင်ပေမယ့် ဒီဘ၀မှာ အနေလှဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကိုလည်း ကိုယ့်အတွက်တော့ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေလို ၊၊ ကိုယ့်ကို ရှိန်လို့ သူ့ကိုယ့်ရို့ စေရမယ့် အဖြစ်မျိုး ကိုလည်း မဖြစ်စေလို ၊၊ လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိုး ဆိုသလို သံသရာခရီးကို ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လမ်းနဲ့ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခရီးသွားဖေါ်ချင်းပေမို့ တခဏတာ ဆုံစည်းရတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး စိတ်အနှောင့်အယှက် မပေးလိုတော့ ပြီ ၊၊ အပေါ်လမ်းက သာမယ်ထင်သူ အပေါ်လမ်းက လျှောက်လိမ့်မည် ၊၊ အလယ်လမ်းက သာမယ်ထင်သူ အလယ်လမ်းကို သွားလိမ့်မည် ၊၊ အောက်နားဆီက သာမယ်ထင်သူ အောက်နားဆီက ရွေ့လိမ့်မည် ၊၊
တကယ်တော့လေ ဒီဘ၀ အခြေအနေ ဒီနေ့ဒီကာလကို ခပ်လွယ်လွယ်ရောက်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊၊ အတားအဆီးအခက်အခဲပေါင်းစုံကို ကျော်လွားပြိးမှ ဒီနေ့ဒီကာလ ဒီအခြေအနေလေး တစ်ခုကို ရရှိခဲ့တာ ၊၊ ဂုဏ်ယူမိတာပေါ့ ၊၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ကျေနပ်မိတာပေါ့ ၊၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်အားရ ပီတိ တွေက အဲဒီ ဘ၀နောက်ကွယ်က အရောင် တွေစွန်းပေနေတဲ့ ငွေစကုတွေ မဟုတ်ပါဘူး ၊၊ ဖြူစင်မှု မရှိတဲ့ ပြည့်စုံ ခြင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး ၊၊ ကိုယ့်တက်စွမ်းသမျှ ကိုယ့် အတက်ပညာလေးနဲ့ ကိုယ်ဖွားသောမြေ ကိုယ့် ဌာနေကို အခြေတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်ဖို့ ပေးဆပ်ခြင်းက ရရှိလာတဲ့ ပီတီ သက်သက်ရယ်ပါ ၊၊ အင်း လေ ဒါကိုယ်လည်း ကိုယ် ကိုနားလည် ကိုယ်နဲ့ လမ်းကြောင်းတူသူတွေသာ ခံစားပေးနိုင် ပေမပေါ့ ၊၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကာလကတည်း က ဖြူစင်စွာ အသက်မွေးရပါ၏ ရယ်လို့ ရည်မှန်းလို့ ဖြူစင်တဲ့ အသက်မွေး ပညာကို သင်ယူဖို့ အားသန်မိခဲ့ပါတယ် ၊၊ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ပညာနဲ့ သာ အသက် မွေးသူ ဖြစ်ရပါလို၏ ဆိုတဲ့ အတိုင်း အသိပညာတွေ ပြည့်ဝစေဖို့ ရိုးကုပ်ကြိုးထုတ် ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ လူ့အသက်ကို ကယ်ဆယ် ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးချင်ခဲ့ပေမယ့် ကံတရားက စေခိုင်းတာက လူသားတွေ ဘ၀ အခြေမြင့်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘ၀ ၊၊ ဂုဏ်ယူမိပါသည် ၊၊ တကယ်ကို ဂုဏ်ယူမိပါသည် ၊၊ လူဦးရေ သန်းပေါင်းများစွာထဲမှာမှ အနည်းငယ်သော လူသားတွေသာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဒီအခွင့်အေ၇း ၊၊ ကိုယ်တိုင် လည်း ဇွဲသန်လို့ လူသားကောင်းကျိုး သယ်ပိုးခွင့်အတွက် ပီတိတွေ တပွေ့တပိုက် နဲ့ အင်မတန် မှ ကျေနပ်ခဲ့ရပါသည်၊၊
မှတ်မိပါသေးသည် ဟိုးအရင် အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀ကပေါ့.. ရုပ်မြင်သံကြားက ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အကျိုးပြု ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခု…. အင်းစိန်ကြို့ကုန်းက တိုင်လုံးကြီးတွေနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ YIT ကျောင်းကြီးမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံအနှံ့ တံတားတွေ လိုက်ဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ.. အော် တကယ်ကို အားကျစရာ……. ဆယ်တန်းမှာ အမှတ် ကောင်းအောင် ဖြေ... ဆရာဝန်မဖြစ်ရပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာပါ့... သြဘာလမ်းဆိုတာကိုလည်း ရင်ခုန်စွာရောက်ဖူးချင်ခဲ့ကြတယ်.. တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေပါ.. အဲဒီ အိပ်မက်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာအရောင်မှာ ခြယ်စိုး ထားတာ မရှိခဲ့တာတော့ အသေအချာပါပဲ ၊၊
တကယ်တန်းကျတော့ အိပ်မက်ဆိုတာ မိုးလင်းရင် ပျောက်ကွယ်သွားတာပေါ့လေ.. တက်ချင်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ YIT ကျောင်းကြီးရဲ့ အဝေးမှာ တကွဲတပြားစီ ကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်….. ဒါတွင်မက တကယ့် လုပ်ငန်းခွင် ၀င်တော့လည်း …………..
ဒီလိုနဲ့ …… တကယ့်လက်တွေ့ ဘ၀တွေ မှာတော့ ……………
မြန်မာပြည်ရဲ့ အသက်သွေးကြော မိခင်ဧရာဝတီ ကို ဖြတ်ကျော်တည်ဆောက်ထားတဲ့ တံတားကြိး ၄ စင်း အနက်တွင်မှ တံတားတစ်ခုမှာ ပါဝင်တည်ဆောက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရတဲ့ အခွင့်အရေး ၊၊ လူတကာ မက်မောတဲ့ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ဘ၀ ၊၊ အမြင်မှာ တကယ်လှပေမယ့် ကိုယ်တိုင်သာ သိတဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေက အမော တွေ ၊၊ အမောတွေ ၊၊ အမောတွေ ၊၊ အဲဒီအမောတွေ နောက်ကွယ်က ဒေါသတွေ မောဟတွေ လောဘတွေ ၊၊ အဲဒီ လောဘတွေ မောဟတွေနဲ့ လျှံထွက်လာတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ၊၊ ဟိုစဉ်ကတည်းက ဒါတွေကို မမက် မောမိသူမို့ မောဟတွေ ဖုံးလွမ်းထားတဲ့ လောဘကိန်းဂဏန်းတွေကြားမှာ အသက်တစ်ချက် ၀၀ ရူဖို့ဆိုတာ ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးမှာ နေပြီး လေငတ်နေသူလိုပါပဲ ၊၊ ကွင်းပြင်ကြီးက ကျယ်ပေမယ့် ကိုယ့်အသိတွေက ပိန်းပိတ်နေတယ် ၊၊ လေတွေတဟူးဟူး တိုက်ခတ်နေပေမယ့် အသက်ရူ ခြင်းတွေက မွန်းကျပ်နေတယ် ၊၊ ရေတွေ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေပေမယ့် ကိုယ် သောက်တဲ့ ရေ ဖြူစင်ပါသလားရယ် လို့ သောက်ပြိးတိုင်း ငတ်မပြေ ခံစားနေရတယ် ၊၊
ဒါကြောင့်လေ သံယောဇဉ်တွေ နဲ့ ရစ်ပတ်နှောင်ထားတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် မောင်နှမတွေကို အသာ ကျောခိုင်းလို့ …. ဖြူဖြူစင်စင်လေး သောက်သုံးခွင့်ရမယ့် ရေတစ်ခွက်အတွက် ၊ အေးအေးမြမြလေး ရူသွင်း ရှိုက်ခွင့်ရမယ့် လေတစ်ထွေးအတွက် ၊ မောဟတွေ ကင်းစင်တဲ့ အစာတစ်လုတ်အတွက် နှုတ်မဆက်ချင် ပေမယ့် လက်ပြခဲ့ပါတယ် ဧရာဝတီရယ် ၊၊ ကိုယ့်ကို နားလည် ခွင့်လွတ်ပေးပါ ၊၊
အပြစ်မဲ့စွာ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေတဲ့ အမိဧရာဝတီ ကို နှုတ်မဆက်ချင်ပေမယ့် သံသရာ အတွက် ဒီတခါတော့ တကယ့် နှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ် ………………………..
နားလည်ပေးပါ ဧရာဝတီရယ် ………………
လူသာမာန်တွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ စွန့်ခွာခြင်းကို သံသရာအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယေက် အတွက် အမှတ်တယ ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည် ၊၊
“ဟယ်လို အမိန့်ရှိပါခင်ဗျာ ”
ညအချိန်မတော် လာတဲ့ တယ်လီဖုန်းမို့ နဂိုကခပ်ထိတ်ထိတ် ဖြစ်နေရတဲ့အထဲ ဒီလိုကြားလိုက် တော့ ပိုလို့တောင်မှ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ဘာပြသနာများပါလိမ့် ၊၊ အမ ဒီလောက် တုန်လှုပ် နေပုံ ထောက် တော့ ဘယ်လို ကြီးလေးတဲ့ ပြသာနာများပါလိမ့် ၊၊
“ဘာဖြစ်တာလဲအစ်မရယ် အလုပ်မှာများ ပြသနာတက်တာလား ” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် အမေးအဆုံး မှာတော့ ငိုသံ လေး သဲ့သဲ့ နဲ့
“အင်း လူမှုရေးပြသနာ ပဲ ဆိုပါတော့ မောင်လေးရယ် ၊ တကယ့်လို့ သာ အထက်လူကြီးတွေ သိသွားရင်တော့ အလုပ်ကိုပါ ထိခိုက်တော့မယ် ”
ဆိုတဲ့ အစ်မရဲ့ ငိုမဲ့မဲ့ အသံကြားတော့ ပိုလို့တောင်မှ ရင်ထိတ် ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ဘယ်လို များ ဖြစ်ရ တာပါ လိမ့် ၊၊ ကိုနိုင်သီဟ ဆိုတာက အစ်ကိုလို ၊ သူငယ်ချင်းလို လေးလေးစားစား ချစ်ခင်ရတဲ့ အစ်ကို ကြီးတစ်ယောက် ၊၊ အင်မတန်မှ အပေါင်းအသင်း ၀င်ဆံ့သလို အင်မတန်မှလည်း ပျော် ပျော်နေတက်သူ ၊၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်း အထက်နဲ့ အဆင်ပြေသလို အောက်နဲ့လည်း တည့် အောင် ပေါင်းသင်းနိုင်သူအဖြစ် နာမည်ရတဲ့သူတစ်ယောက် ၊၊ ထူးထူးခြားခြား ၀ိသေသ ဂုဏ် ပုဒ်တွေနဲ့ လူတစ်ယောက် ၊ လူတိုင်းက လေးစားရတဲ့ သူတစ်ယောက် ၊ ရာထူး ရာခံ နဲ့ အင်မ တန် မှ လေးစာဖွယ် လူတစ်ယောက် က ဘယ်လို ဖြစ်ပါလိမ့် ၊၊
“ စိတ်အေးအေး ထားပြီး သေချာပြောပြပါအုံး အစ်မရယ် ၊ ဟုတ်ရော ဟုတ်လို့လား ၊ အစ်မကရော ဘယ်က ကြားလာတာလဲ ၊၊ ”
ဆိုတော့ ငိုချင်ရဲ့လက်တို့ ပြောချင်ရက် အမေးစောင့်နေတဲ့ အစ်မ ခင်ဦးတစ်ယောက် ငိုသံနှောပြီး ပြောပါ လေတော့သည် ၊၊
အော် အတိတ် ကာလလေးကို ပြန်တွေးမိတော့ ကိုနိုင်သီဟ အကြောင်းကို ပြန် သတိရ မိပါတယ် ၊၊ ဖြစ်ခဲ့တာကြာတော့ မေ့တောင်နေကြပေါ့ ၊၊ အခုတော့လည်း တချိန်က သူ မဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို သူတို့ အိမ်ထောင်စုလေးက အင်မတန်မှ ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ ၊၊ အခုဆိုရင် သားကြီး ညီမင်းတောင်မှ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီ ၊၊ အငယ်မ နွယ်နီမင်းက စင်ကာပူမှာ Junior College တောင် တက်နေ လေရဲ့ ၊၊၊ အငယ်ကောင် ငွေမင်းက ပြင်ဦးလွင် မှာ တပ်မတော် အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား ကြီးပေါ့ ၊၊ အေးချမ်း တည်ငြိမ်နေတဲ့ မိသားစုလေးက ဟိုးအရင် အတိတ်က မုန်တိုင်း မ၀င်ခဲ့ဘူးသလို တည်ငြိမ် လို့ပါလား ၊၊ မြင်ရသူ တွေ အတွက် အားကျစရာ မိသားစုလေးတစ်ခု ၊၊
သူတို့အကြောင်းလေးကို ပြန်သတိရမိတော့ အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလေးကို သတိရမိ ပါရဲ့ ၊၊ အဲဒီမုန်တိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ တကယ်လို့သာ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းကူညီ မဖြေရှင်းပေးခဲ့ဘူး ဆိုရင် သူတို့ မိသားစုလေးဟာ ဒီနေ့လို သာယာနေမှာ မဟုတ်ပေဘူး ၊၊ ကိုကြီး ကိုနိုင်သီဟ လည်း အရက်သမားကြီး ဖြစ်နေမလား ၊၊ အစ်မခင်ဦးရော မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် သောက တွေ ပွေနေမလား ၊၊ သားသမီးတွေရော အခုလို သာယာတဲ့ အနာဂတ်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား ၊၊ အော် အမှားမကင်းတဲ့ လူသားတွေအတွက်တော့ အမှားဆိုတာ လူတိုင်း ကြုံတွေ့ ရတက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တရားတစ်ခုပါပဲလေ ၊၊ အဲဒီအမှားကို သိသိကြီးနဲ့ ဆက်မှား သွားသူနဲ့ ကိုယ့်အသိတရားနဲ့ကိုယ် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖေးမကူညီမှုနဲ့ အတူ ပြန်လည် တည့်မတ်သွားသူတွေကို တော့ အမှားလုပ်ဖူးသူတစ်ယောက် အနေနဲ့ထက် အမှားကို ပြုပြင် နိုင်သူ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ဖေးကူသွားရမှာ ပါပဲလေ ၊၊
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က အဲဒီအမျိုးသမိးကို သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ် ၊၊ တက်နို်င်ဘူးလေ ပြသနာတွေက ဖြစ်နေပြီပဲ ၊၊ ဒီအချိန်မှတော့ ရှက်နိုင်တော့ဘူး ၊၊ ကိုယ့်ဘက်က အရှက်မကွဲဖို့သာအဓိကပေါ့ ၊၊ သူတို့ လည်း ဘာမှတော့ ထွေထွေ ထူးထူး ပြသနာမရှာနိုင်ပါဘူး ၊၊ ကိုယ်ကပဲ လူတက်ကြီး ၀င်လုပ်ရတော့တာပေါ့ ၊၊ အစ်မခင်ဦး ခံစားနေရတာလည်း နားလည်ပါတယ် ၊၊ အဲဒီ အချိန်မှာ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် တရားတာ မတရားတာ တွေ ကိုယ် မတွေးနိုင်ခဲ့ဘူး ၊၊ ပြသနာတွေကို အကောင်း ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပဲ စဉ်းစားခဲ့တယ် ၊၊ ကလေးတွေ နဲ့ ဒီမိသားစုလေး မပြိုကွဲဖို့သာ အဓိကလို့ ကိုယ် သဘောထားခဲ့ပါတယ် ၊၊ တခါတလေမှာ တစ်ဖက် အတွက် သူရဲကောင်း ဖြစ်နေပေမယ့် အခြား တစ်ဖက် အတွက်တော့ ကိုယ်က လူဆိုးလည်း ဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေ ၊၊
ဒီလို ပြသာနာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြိးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကလေးတွေ အနေနဲ့ အဖေဖြစ်သူကို အထင်မ သေးအောင် လည်း ပြောပြ စည်းရုံး ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ဖုံးဖိထားလို့ ရတဲ့ ပြသနာ မဟုတ်လေတော့ သူတို့ နားလည်နိုင်မယ့် စကားလုံးတွေ ကို ရွေးပြီး သူတို့ နားဝင်အောင် ပြောရပါတယ် ၊၊ အစ်မခင်ဦးကိုလည်း ဖုံးဖုံးဖိဖိ သိုသို သိပ်သ်ိပ် နေဖို့ တ၇ားချ ရပါတယ် ၊၊ တကယ်လို့ သူဖက်က တင်းမယ် ဆိုရင်လည်း ဒီပွဲမှာ ဘယ်ဖက်မှ အဆင်မပြေပဲ ပွဲပျက်တော့မယ် လေ ၊၊ သူ့ကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဖိနှိပ်ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ တကယ်ပြန်တွေး ကြည့်မယ် ဆိုရင် အစ်မ ခင်ဦး က မှားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ၊၊ ဒါပေမယ့် သူမှန်တယ်လို့ လည်း ဆိုလို့ မရပြန်ပါဘူး ၊၊ အဲဒီတော့ သူ့ကို လည်း ဖိရပါတယ် ၊၊ “ အစ်မ ဘာဖြစ်ချင်လဲ ၊၊ အခုချိန်မှာ သစာမရှိတာတွေ ရင်ကွဲတာတွေ လာလုပ် မနေနဲ့ ၊၊ အစ်မ ကွာနိုင်သလား ၊၊ ဒါဆို နောက်တစ်ယောက် ကို အိမ်ဖေါ် ခေါ်တင်မယ် ၊၊ အစ်မဆင်းသွား ” ဆိုတာမျိုး ရက်ရက် စက်စက် လုပ်ရပါတော့တယ် ၊၊ သိပါတယ် လေ ၊၊
တကယ်တော့ အစ်မခင်ဦးမှာ ဘာအပြစ်မှ ရှိတာမဟုတ် ၊၊ ဒါပေမယ့် မိန်းမသဘာဝ ပွစိပွစိ လုပ်နေမယ် ၊၊ မကြာခဏ ခလုတ်တိုက်နေမယ် ၊၊ အမြဲတမ်း ထေ့ငေါ့ နေမယ်ဆိုရင် အပြစ် လုပ်ထားသူ ပေမယ့် ကိုကြီး ကိုနိုင်သီဟ ပိုပြီး အရွဲတိုက် တော့မယ် ၊၊ ဒါဆိုရင် ပြသနာတွေက အကောင်းဖက်ကို ဦးမတည်ပဲ အဆိုးဖက်ကိုသာ ပြောင်းသွားတော့မှာပေါ့ ၊၊ ဒီအချိန်ဟာ အင်မတန် မှ အကိုင်အတွယ်တက်ဖို့ လိုပါတယ် ၊၊ အပျော့ဆွဲဆိုတာမျိုး ဆွဲတက်မှ အဆင်ပြေမှာ ၊၊ အဲ .. ကိုယ်တကယ် မသတီတော့လို့ … ရာသက်ပန်လည်း ပြက်သားနိုင်တယ် …မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးး ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ ၊၊ ဒါပေမယ့် ဒီပြသနာမှာက ကလေးတွေ လည်း ရှိနေသေးတယ် ၊၊ ဘယ်လို ပျက်ဆဲလို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ ၊၊
လူတစ်ယောက်ဟာ သစာမရှိဘူး ၊၊ဖောက်ပြန်ရေးသမား ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ သူကို အမြဲတိုက်ခိုက် နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူလည်း ထွက်ပေါက်တစ်ခု ရှာတော့ မှာပေါ့ ၊၊ ငါမှ မမှားတာ ငါဘာဂရုစိုက်စရာ လိုလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးက ကျောင်းသင်ခန်းစာမဟုတ်တဲ့လူမှုရေး ပြသနာ တွေ မှာတော့ ငါမှန်တယ် ဆိုပြီး အခြားတစ်ဖက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖိနှိပ်လို့မရပါဘူး ၊၊ ဒါဆိုရင် ပြသနာတွေဟာ အကောင်းဖက်ကို ဥိးမတည်ပဲ အဆိုးဖက်ကိုသာ ဥိးတည်သွားတော့မှာပါ ၊၊ ဒါဟာလည်း ပြသာနာကို လက်ခံ ဖြေရှင်း သူ တစ်ဥိးစီရဲ့ အမြင်ပေါ့လေ ၊၊ လူဆိုတာ မှားတက်တဲ့ သဘာဝ ရှိတာမို့ ဖြစ်ပြိးသွားတဲ့ ပြသနာထက် နောက် ပိုင်းမျာ အညင်သာဆုံး ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာမျိုးကသာ အသင့်တော်ဆုံး အဖြေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊၊
မိသားစုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ဒါပါပဲလေ ၊၊ တစ်ဥိးတစ်ယောက် ရှုံးနိမ့်နေချိန်မှာ မဖိနှိပ်ပဲ အားပေးတာ ၊၊ နှုတ်က ဖွင့်ဟဖေါ်ကျူး အားပေးနေတာထက် လိုအပ်မယ် ထင်တာလေးတွေ ကို တိတ်တိတ်ဆိတ် ဆိတ် လုပ်ပေးတာ ၊၊ သူနေစေချင်သလိုလေး နေပေးတာ တွေဟာလည်း ထောက်ပံ့ကူညီတာပါပဲ ၊၊ အမှန်တကယ်ပြန်တွေး ကြည့်မယ် ဆိုရင် အခုပွဲမှာ အစ်မခင်ဦးနိုင်ပြီပေါ့ ၊၊ သို့သော် မိသားစု ဘ၀မှာ အနိုင်အရှုံးဆိုတာ ဂုဏ်သိကာနဲ့ မလဲယူစကောင်းပါ ၊၊ တကယ်လို့ အဲဒီအချိန်မှာ ပွဲကြမ်းခဲ့ရင် ကာယကံရှင်နျစ်ယောက်ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ရင် ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မလဲ ၊၊ ရှက်၇မ်းတွေ ရမ်းပြီး ပွဲတွေ ကြမ်းကုန်ပြီပေါ့ ၊၊ ရလာမယ့် အကျိုးဆက်ကဘာလဲ ၊၊ ဘာဖြစ်လာမလဲ ၊၊ မိသားစုဘ၀လေး ပြိုကွဲသွား မယ် ၊၊ ချစ်တဲ့သူချင်း အမှားတစ်ခုအတွက် လမ်းခွဲရမှာပဲပေါ့ ၊၊ အမှန်တကယ် ပြတ်သားနိုင်ခဲ့ရင် မထောင်းသာပေမယ့် အမှန်တကယ် မပြတ်သားနိုင်တဲ့ အခါ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ခံစားနေရမှာ ဒီချစ်သူ နှစ်ယောက်ပါပဲလေ ၊၊
ဟုတ်ပါတယ် ၊၊ ဒါဟာမခင်ဥိး မှားခဲ့တာမှမဟုတ်တာ ၊၊ မှားတာက ကိုနိုင်သီဟ ၊၊ အပြစ်တွေကို ကိုနိုင်သီဟ ခံပေါ့ လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ကိုနိုင်သီဟကို ဘယ်လို အပြစ်ပေးမလဲ ၊၊ လူသိရှင်ကြား ဖောက် ပြန်ရေးသမားအဖြစ် ထုတ်ဖေါ်ကြေငြာမလား ၊၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ရေးကို ရပ်စဲလို့ လမ်းခွဲလိုက် ကြမလား ၊၊ ဖြစ်တာတွေက ဖြစ်ပြီးပြီမို့ အပြစ်တင်နေလို့ရော ဘာများရလာပါအုံးမလဲ ၊၊ ရလာဒ်က ဘာဖြစ်လာမလဲ ၊၊ ဖြစ်ပြီးတဲ့ ပြသနာကို ၀ိုင်း ၀န်း အဖြေရှာတာသာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ပေဘူးလား ၊၊
အခုတော့လည်း အားလုံးက လေးလေးစားစား မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေပေးကြတယ် ၊၊ အရင်လိုပဲ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံကြတယ် ၊၊ ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အခါ အခုတော့လည်း ကိုနိုင်သီဟ ဆိုတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူမှ ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူး ၊၊ အစ်မ ခင်ဥိးလည်း အခုဆိုရင် ပျော်ရွှင် လို့ ၊၊ အားလုံးရဲ့ လေးစားစွာဆက်ဆံမှုကြောင့် ကိုနိုင်သီဟဟာ အရင် ကထက်တောင်မှ ပိုပြီး တည်ငြိမ်လို့ လာပါတယ် ၊၊ မိသားစု အပေါ်မှာလည်း အရင်ထက်တောင် ပိုဂရုစိုက်လာခဲ့ပါတယ် ၊၊ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ပဲ မှတ်ယူရမှာပေါ့ ၊၊ သူကိုယ်သူလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရှက်တစ်ခုနဲ့ ထိမ်းသိမ်း သွားပါတယ် ၊၊ ဒါဟာ အဖြေမှန်ပဲပေါ့ ၊၊ တကယ်လို့သာ မလိုလားအပ်ပဲ ပေါက်ကွဲကြ ၊ ပြောကြဆိုကြ ဆိုရင် တော့ ကွဲကြ ပြဲကြရုံပေါ့ လေ ၊၊
အင်းအတိတ်ကို ပြန်တွေးမိတာပါ ၊၊ ဒိနေ့ သမိးလေး နွယ်နီမင်းကို ကျောင်းမှာ သွားပြီး ခေါ်ရအုံးမယ် ၊၊ ဒီနေ့က သမိးလေးရဲ့ မွေးနေ့မို့ ညစာကျွေးမယ်လို့ ကတိပေးထားမိလေတာကိုး ၊၊ အင်းပြီးမှပဲ ကိုကြီး နိုင်သီဟ တို့ဆီ လည်း ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါအုံးမယ် ၊၊ မတွေ့ဖြစ်ကြတာတောင်ကြာပေါ့ ၊၊ ကိုယ့်မှာကလည်း တစ်ကိုယ်တည်းသမားမို့ အိမ်ထောင်တာဝန်မရှိပေမယ့် အခြား ဗာရီရ တွေ ကများသားလားနော် ၊၊ အခုတော့လည်း လူမှူရေး လုပ်ငန်းတွေပဲ ပိုလုပ်ဖြစ်နေလေရဲ့ ၊၊ အော် ၅၀ဆိုတဲ့ အသက်ဆိုတာလည်း မငယ် တော့ပါလားနော် ၊၊ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ် လုပ်အုံးမှ ၊၊ အခြားသူတွေကို ကူညီဖြေရှင်း ပေးခဲ့ဘူးပေမယ့် ကိုယ်ပြသာနာတော့ ကိုယ်မရှင်းနိုင်ခဲ့သမို့ ခုလို တစ်ယောက်တည်း ဘ၀နဲ့ပဲ အရိုး ထုတ်ရပေအုံးမယ် ၊၊ ကိုကြီးနိုင်သီဟတို့ အစ်မခင်ဥိးတို့ တွေ့ မှ နောက်ရပေအုံးမယ် ကျွှန်တော့်ကိုကျ တော့ မကူ ညီခဲ့ ကြပဲကိုး ရယ်လို့လေ၊၊
( မိသားစု အတော်များများ ၊ သမီးရည်းစားအတွဲတော်တော်များများမှာ ကြုံဖူးတက်တဲ့ ကြုံတွေ့ရတက်တဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ပြသနာလေးတစ်ခုပါပဲ ၊ အတွဲတော်တော်များများ ရဲ့ ၈၀ % လောက်ဖြစ်တက်ပါတယ် ၊ အဲဒီထဲမှာ ကိုယ်မပါသေးရင်တော့ အင်း ၂၀ % ထဲမှာ ပါတယ်လို့ ကြိတ်ပြီး ၀မ်းသာရမှာပေါ့ ၊၊ သို့သော် သိပ်တော့ ၀မ်း မသာပါနဲ့အုံးလေ သမိုင်းဆိုတာ သေတဲ့နေ့မှ ပြောလို့ရမှာမို့ ခဏတာတော့ ၀မ်းသာရမှာပေါ့ ၊၊ ဘာတွေ ပဲ ဖြစ်လာ ဖြစ်လာ အဲဒီလို ကြုံတွေ့လာတဲ့ အခါမှာသာ အငြင်သာဆုံး နည်းနဲ့ အကောင်းဆုံး လမ်းကို ရွေးချယ် ဖြေ ရှင်း နိုင်ဖို့ သည်သာ အလိုအပ်ဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး ၊ အရိုးဆုံး အဖြေပါ တစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော့် အမြင်လေးကို တင်ပြလိုက်ရပါသည် )
၀န်ခံချက် ၊၊ ၊၊ ပိုစ့်အဟောင်းလေးကို အနည်းငယ် ပြုပြင် ရ်ျ ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်ပါသည် ၊၊